Otu esi etinye onye ahịa mbugharị na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
Fraịde, Ọktọba 22, 2021 Saturday, October 2, 2021 by Jọshụa James
Lelee ma arụnyere ngwugwu WGET
Nhọrọ 2. Wụnye onye ahịa mbugharị na Snap
Otu esi emelite onye ahịa mbugharị
Otu esi ewepu (wepu) onye ahịa mbugharị
N'ime nkuzi a, ị ga-ama ka esi etinye Zoom na desktọpụ Ubuntu 20.04 gị.
Site na ndabara, Zoom adịghị na ebe nchekwa ndabere nke Ubuntu 20.04, ebe ọ bụ na ọ bụghị ebe mepere emepe. Ya mere, iji wụnye Zoom, ị ga-achọ ibudata na wụnye na aka na Zoom's download page.
Snap na-abịa na ndabara na sistemụ Ubuntu. Ọ bụrụ na ị na-eji Snaps na sistemụ gị, ọ ga-adị mfe ịwụnye onye ahịa site na iji Snap wee debe ya naanị site na iwu kama ịmegharị n'ụzọ ntuziaka.
Iji mee nke a, na njedebe gị, mebie iwu a:
Na nrụnye zuru ezu, ị nwere ike ịgba ọsọ Zoom n'ụzọ ole na ole dị iche iche.
N'aka nke ọzọ, gbaa ọsọ Bugharịa & nye iwu n'azụ ka ịtọhapụ ọdụ ụgbọ ala:
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ a na desktọpụ gị mepee ụzọ ahụ: Ihe omume > Gosi ngwa > mbugharị. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
Ozugbo emepere, ị ga-abịa na ihuenyo nbanye ngwa, banye ma ọ bụ mepụta akaụntụ.
Ma nke ahụ bụ ya, ma ị rụnyela onye ahịa Zoom nke ọma na desktọpụ Ubuntu 20.04 gị.
Maka mmelite, ị ga-achọ budata ọzọ na .deb ngwugwu ma megharịa iwu nwụnye iji kwalite.
Ọ bụrụ na itinyere mbugharị site na iji Snap, jiri iwu na-esonụ iji melite Snaps arụnyere gị:
Iwepu mbugharị ka ọ naghịzi achọ ya dị mfe; Naanị gbaa iwu a:
Ọ bụrụ na itinyere onye ahịa mbugharị site na iji Snap, jiri iwu a wepụ:
Categories Ubuntu Tags Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa, Mbugharị Mail igodo